अष्ट्रेलियाको चाइनाटाउन सिनेमामा यही शनिबार र सोमबार 'शत्रु गते' ! - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाको चाइनाटाउन सिनेमामा यही शनिबार र सोमबार ‘शत्रु गते’ !
Posted by Himalayan Kangaroo | १४ चैत्र २०७४, बुधबार ११:५४ |
मेलबर्न । नेपालमा दर्शकको माया बटुल्न सफल फिल्म ‘शत्रु गते’ अब अष्ट्रेलियावासीको माया बटुल्न आउने भएको छ। स्मार्ट एक्सेस इन्टरटेन अष्ट्रेलियाले कंडेल कन्सल्टेन्सीको मूख्य प्रायोजनमा शत्रु गतेलाई अष्ट्रेलियावासी दर्शकसामु ल्याउन लागेको हो।
नेपाली कलाक्षेत्रमा रुचाइएको मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य तथा अन्य लोकप्रिय कलाकारहरु दीपा श्री निरौला, दीपक राज गिरि, प्रियंका कार्की, पल शाह, आंचल शर्मा, किरण के.सी आदि द्वारा अभिनित यस फिल्म अहिले नेपालका हलहरुमा भव्यताका साथ चलिरहेको छ। यस फिल्मलाई रमाइलो र पारिवारिक फिल्मको रुपमा समिक्षा गरिएको छ।
मेलबर्नमा ‘शत्रु गते’ को शो आगामी ३१ मार्च शनिबारको दिन बेलुका ७ :३० बजेदेखि र २ अप्रिल सोमबारको दिन बेलुका ७ बजेदेखि सुरु हुनेछ। टिकट शुल्क २५ डलर तोकिएको शो चाइना टाउन सिनेमामा हुने बताइएको छ। टिकटको लागि मेलबर्नको लिटल कोलिंस स्ट्रिटमा रहेको स्मार्ट एक्सेस इन्टरटेनको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। कार्यालयको सम्पर्क नम्बर +६१ ३९०४३ ०५८८ मा सम्पर्क गरेर पनि टिकट बुकिङ्ग गर्न सकिनेछ।
कार्यक्रमको मूख्य प्रायोजक रहेको कंडेल कन्सल्टेन्सीले मेलबर्नमा हुने सबैजसो नेपाली कार्यक्रमहरुलाई प्रयोजन गर्दै आएको छ। कन्सल्टेन्सीका संचालक राज कंडेलले आफूहरुको उद्देश्य व्यवसायिक सफलता मात्र नभई नेपालीहरुलाई सक्दो सहयोग गर्नु र नेपालीको कला तथा संस्कृतिलाई प्रबर्द्धन गर्नु पनि रहेको बताउनुहुन्छ। कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी तथा अष्ट्रेलिया बसाइ सर्न चाहने नेपालीहरुको लागि गुणस्तरीय सेवा दिंदै आएको छ।
Previousप्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलको बेवसाइट र मोबाइल एप सार्वजनिक
Nextप्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षमा राराबाट देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने
गण्डक नदीमा पानीजहाज चल्ने भो
८ बैशाख २०७६, आईतवार ०२:२५